Project Airbus A32x FD-FMC v1.55: liistada SID / STAR ee FMC
Su'aal Project Airbus A32x FD-FMC v1.55: liistada SID / STAR ee FMC
1 sano 7 bilood ka hor #814 by CL38
Anigu waxaan u soo dirayaa su'aashan sababta oo ah ma heli karo dhibaatooyin dhawr maalmood.
Dhibaatadaydii: ka dib markii la rakibay mashruuca Project Airbus A32x FD-FMC v1_55 (software laga soo duubay library.avisim.net) markii aan codsiga ka bilaabo P3D_v4 diyaarad bilaash ah oo qorsheyn bilaash ah oo ka socota Nice-Côte d'Azur ilaa London Heathrow, iyo ka dib markaan ku shaqeynayo FMC ma haysto liistada SID / STAR iyo kumbuyuutarka FMC waa mid aan firfircooneyn.
Waxaan ogaanay in buuggan rakibaadda ee addon ay muujinayso in noocan oo kale ah dhacdo waa inuu ka yimaadaa rakibaad xun ee XMLTools3D.dll ama caddayn xun ee DLL.xml, laakiin ma arko qalad aan ku sameeyey rakibidda.
Waxa aan sameeyay:
- tan iyo bilihii 2 waxaan ka tegey FSX Gold Edition ilaa P3D v4; Waxaan horeyba ugu dhejiyey mashruucan Airbus on FSX dhibaato la'aan, waxayna u shaqaysay sida caadiga ah;
- ka hor inta aan u guurin P3D I aan la soo saarin FSX iyo addonkeyga;
- ka dib markii lagu rakibay P3D waxaan dib u farsameeyey FSX (marka laga reebo Horumarka) si loo soo kabsado diyaaradaha ku jira FSX laakiin ka maqan P3D, dhibaato la'aan;
- Waxaan dib u dhistay oo waxaan adeegsaday A320 Familly Mega ka soo Rikoooo, wax dhibaato ahna maaha;
- Waxaan soo dejiyey Project Airbus A32x v1_55 oo ay ku rakibtay ka dib buuggan rakibida (qalabka gacanta loogu talagalay P3D v4); Waxaan dareemay kala duwanaansho u dhexeeya buug-gacmeedka iyo geedkii software-ka
§5: Waxaan ku darsaday XMLTools3D.dll galay C \_ Barnaamijyada \_ Lockheed_Martin \_ Prepar3D_v4
§5: Waxaan abuuray "Noocyada Modules" ee C \_ Barnaamijyada \_ Lockheed_Martin \_ Prepar3D_v4 halkaas oo aan ku dhejiyay LoggerX.dll
§7: FD-FMC_database.kmz faylka FD_FMC kuma jirin FD_FMC Doc & Manuals; Waxaan ku soo rogay FD-FMC faylka;
§7: feylka FMC_Path.ini waxaa ka maqan v1.55, markaa waxaan dib u soo celiyay FMC_Path.ini nuqulkaygii hore ee v1.0 oo aan ku soo daabacay feylka FD_FMC
§8.2: Faylka DLL.xml wuxuu ku yaalaa C \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Tababarka 'NUMXD_v3; Waxaan ku dari doonaa labo cadeyn oo cayiman (XMLTools iyo LoggerX); lid ku ah waxa la tilmaamayo Waxaan la yaabanahay haddii faylkaasi uu ku jiro qaybta ugu weyn ee P4D sida lagu tilmaamay;
- Markii aan bilaabay duulimaad lacag la'aan ah ayaan la kulmay dhibaatada
- Waxaan adeegsaday Project Airbus A32x 1_55 oo ka socda FSX (rakibidda automatic); Waxaan la kulmay dhibaatooyin 2 ah si aan u ogaanin inayan soo bandhigin ↑ 5 iyo wax FMC lahayn ↑ 7; in aan xaliyo adigoo ku rakibaya FSX Acceleration; ka dibna duulimaadkayga Nice> London oo leh SID / STAR waxay si fiican u shaqeysay.
Waxaa sidoo kale jira faallo muhiim u ah, taas oo ah marka aan isticmaalayo FSX waxaan leeyahay fariimo nabadgelyo ah si aan u aqbalo XMLTools.dll sida faylalka nabadgelyada iyo barnaamijka kalsoonida, farriimo ammaan ah oo aanan haysan markii aan isticmaalayo P3Dv4.
Haddii qofna iiga sheegi karo sida looga bixi karo xaaladan xun ee leh P3D v4, waxaan noqon lahaa mid aad u mahadcelin.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.187